လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများဖြင့် တိကျစွာဖော်ပြထားသော်လည်း ဥပဒေကို သွေဖည်ပြီး ငါတို - Yangon Media Group
လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများဖြင့် တိကျစွာဖော်ပြထားသော်လည်း ဥပဒေကို သွေဖည်ပြီး ငါတို
လွှတ် တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကုို တိကျစွာဖော်ပြထားသော်လည်း ဥပဒေကို လမ်းလွဲသွေဖည်ပြီး ငါတို့ပြောသလိုသာလုပ်၊ မလုပ် ရင်လည်း များရာဆန္ဒမဲနဲ့ပဲ ဆုံး ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသက် ရောက်နေကြောင်း တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်သန့်က ပြော ကြားခဲ့သည်။ မတ် ၁၄ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ် မြောက်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက် မြောက်နေ့အစီအစဉ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်းလေ့လာစိစစ်ရေးပူပေါင်းကော်မတီအစီရင်ခံစာအပေါ်ဆွေးနွေးရာတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပ ဒေမှာ တိတိကျကျဖွင့်ဆိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများမှာလည်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုတိကျစွာ ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားလျက်နဲ့ ဥပဒေကိုလမ်းလွှဲ သွေဖည်ပြီး ငါတို့ပြောသလိုသာလုပ်၊ မလုပ်ရင်လည်းများရာ ဆန္ဒမဲနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်နေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်”ဟု ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ခင် မောင်သန့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားသည့်အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာသည့်အခါ ပြင်ဆင်ဖို့တင်ပြသည့်ဥပဒေကြမ်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲတွေအပေါ်မှာ ပြင်ဆင်ဖို့ ဆွေးနွေးမှုများ၊ သဘောထားမှတ်ချက်များကို တိတိကျကျ ဖော်မပြထားဘဲ ပုဒ် မ-၂၆၁ ကို ပြင်မယ်ဆိုရင်ဆက်နွှယ်နေသည့် ပုဒ်မတွေကို စိစစ်ရမည်။ (၂၁) ရာစုပင်လုံညီလာခံမှ အတည်ပြု ပြီးဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်း(၁)နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအခန်း(၁)က စတင်ပြင်ဆင်မှသာ ပုဒ်မ-၂၆၁ပြင်ဆင်ချက်နှင့် ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိမည်။ ပုဒ်မ တစ်ခုချင်းစီကိုပြင်လျှင် ပြင်ရမည့် ဥပဒေကြမ်းတွေကို လွှတ်တော် ကို ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြုစုတင်ပြလာခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊
အဆိုပါ လေ့လာစိစစ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှသာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ-၁၃၅ အရ လေ့လာစိစစ်ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၃ တွင် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုပြင်ဆင်လိုပါက အောက်ဖော်ပြပါသတ် မှတ်ထားသောနည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားသည့်အတွက် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကိုပြင်ဖို့ ဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါကြောင်း၊ အခြေခံဥပဒေ၏ နိဒါန်းပုဒ်မ-၁ မှ ပုဒ်မ ၄၅၇ အထိနှင့် ဇယား(၁)မှ(၅)အထိပါရှိချက်တွေအားလုံးကိုပြင် တာမဟုတ်ပါကြောင်း၊ ရှေ့ရောက် ပြီးဖြစ်နေသည့်ဥပဒေနှင့်ညီသည့်တင်ပြချက်ကို ဘာကြောင့်နှောင့်နှေးအောင်လုပ်ချင်နေတာလဲ ဘာကြောင့်ဥပဒေနှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်မပေးလိုရ တာလဲဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ် စရာဖြစ်နေပါကြောင်း ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်သန့်က ပြော ကြားခဲ့သည်။
ခြေ/ဥပြင်ဆင်ရေးကို သဘောထားကြီးစွာဖြင့် အပြုသဘောဆွေးနွေးပြင်ဆင်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တု?
ပြည်ပရွှေ့ပြောင်း အမျိုးသမီး လုပ်သားအများစု လုပ်အားခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် လူကုန်ကူးမှုကု??